Kareemka khafiifka ah ee zucchini iyo leek leh lowska | Cuntooyinka Jikada
Caafimaad qab ah
Zucchini khafiif ah iyo kareemka caanaha leh nutmeg
Maria vazquez | 29/08/2021 10:00 | Cunnooyinka khudradda, Cunnooyinka fudud
Xilliga zucchini waa deeqsi. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee loo diyaarin karo waxay ku jirtaa kareem waxaana jira waxyaabo badan oo la isku dari karo! The kareem khafiif ah oo zucchini iyo leek leh nutmeg oo aan kugu dhiirigelinayo inaad maanta diyaariso waa mid ka mid ah kuwa badan. Sharad fudud laakiin kaamil ah si aad u dhammaystirto cashadaada.
Kareemkaan waxaa lagu diyaariyey saddex maaddo oo kaliya: basasha, caleemaha iyo zucchini. Maaddooyinka fudud ee aanan doonayn inaan ka dhex muuqdo. Sidaa darteed, waxaad dooratay uunsi uunsi ah inaad ku darto kiriimkan, lowska. Waxay siisaa taabasho aad u dahsoon laakiin haddii aadan jeclayn, waad iska dhaafi kartaa ama ku beddeli kartaa mid kale.
Tallaabadu waa ciyaarta ilmaha. Ka warran haddii aan jeclahay inaan sameeyo waa basasha ku raag waxoogaa yar oo baalal leh ka hor intaadan gelin dhammaan maaddooyinka si aad u karisid. Sidaa daraadeed kareemku wuxuu qaataa dhadhan yar oo dheeraad ah. Caadi ahaan waxaan ku sameeyaa saliid saytuun laakiin waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan in la isticmaalo subag yar, waxaan isku dayi doonaa marka xigta!
Kareemka khafiifka ah ee zucchini iyo leek leh lowska ayaa ah mid fudud, khafiif ah, aan qaali ahayn iyo ikhtiyaar ku habboon cashadaada.
Nooca cuntada: Verduras
Waqtiga diyaarinta: 5 m
Waqtiga karinta: 20 m
Wadarta waqtiga: 25 m
2 cucharadas of aceite
4 nuurad waaweyn
1 zucchini dhexdhexaad ah
Basasha jarjar oo ku shiil digsi laba qaado oo saliid ah.
Kadib waxaan gooynnaa liinta waxaana ku darnaa digsi si ay u sii wadaan kariska oo dhan 3 ama 4 daqiiqo.
Halka, waxaan jarjarnay zucchini xabadaha. Marka basasha iyo caleemaha jilicsan yihiin waxaan ku dari karnaa digsi.
Isku qas, shiil dhowr daqiiqo iyo waxaan ku daboolnaa biyo.
Ku dar milix iyo basbaas, ku dar lowska yar, daboolka saar iyo Kari 10 daqiiqo.
Si loo dhammeeyo, waan shiidnaa. Markaa waa inaan ku raaxeysanaa kareemka fudud ee zucchini iyo leek leh lowska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka khudradda » Zucchini khafiif ah iyo kareemka caanaha leh nutmeg
Tofu oo leh boqoshaada la kariyey iyo baradhada la kariyey